China CNC machining Manufacturer na Supplier | Meste
Die Nkedo & zọ
CNC machining bụ teknụzụ nke na - eji igwe igwe akpọrọ ahazi iji hazie ihe eji arụ ọrụ. Typesdị akụrụngwa akụrụngwa eji arụ ọrụ gụnyere CNC lathe, igwe igwe CNC, igwe na-agwụ ike na igwe igwe, wdg.
MESTECH kwadebere ọtụtụ ngwa ngwa ngwa ọrụ CNC, yana otu ndị ọrụ magburu onwe ya na injinia yana usoro siri ike. Anyị na-asọpụrụ inye ndị ahịa anyị ngwaahịa dị elu, nnyefe na ọrụ oge.
Igwe na akụrụngwa ụlọ ọrụ bụ nne nke ụlọ ọrụ ọgbara ọhụrụ. Industrylọ ọrụ na-arụ ọrụ igwe na akụrụngwa bụ ụlọ ọrụ nhazi igwe. Ọkwa teknụzụ nke nhazi igwe na-ekpebi ogo ogo igwe na akụrụngwa.
Gịnị bụ nkenke machining?
Machining bụ n'ichepụta ihe nke wepụ ihe si workpiece iji nweta achọrọ udi na size. A na-akpọ igwe eji arụ ọrụ igwe eji arụ ọrụ. Ihe akụrụngwa maka akụkụ akụrụngwa gụnyere nchara, ọla na-abụghị nke ọla na ụdị ndị ọzọ na ọla siri ike, yana plastik siri ike na ngwaahịa osisi. Machining nwere ike iru elu kpọmkwem akụkụ, otú anyị na-akpọ ya nkenke machining. Ọ bụ usoro nhazi kachasị maka imepụta akụkụ igwe dị iche iche.
Site na mmepe nke teknụzụ kọmputa, a na-ewebata teknụzụ njikwa ụlọ ọrụ mmepụta ihe n'ime akụrụngwa akụrụngwa igwe, nke na-ahụta nchịkọta na akụrụngwa nke ọrụ akụrụngwa akụrụngwa ma meziwanye arụmọrụ na arụmọrụ ziri ezi. A na-akpọ ụdị teknụzụ a nke na-eji sistemụ kọmputa iji arụ ọrụ igwe akụrụngwa teknụzụ ọnụọgụ ọnụọgụ. Igwe akụrụngwa nke na-eji sistemụ arụmọrụ kọmputa bụ ngwá ọrụ igwe na-achịkwa nọmba (igwe CNC).
Gịnị bụ CNC machining?
CNC machining (nkenke machining) bụ n'ichepụta usoro. Ngwaọrụ igwe na-agba ọsọ n'okpuru njikwa mmemme kọmputa. A na-etinye mmemme kọmputa iji mee ka ndị na-egbutu ihe mepụta nkenke arụ ọrụ dabara nke usoro mmemme ahụ (akpọ G koodu).
CNC machining bụ n'ichepụta usoro ihe eji arụ ọrụ na kọmputa na-egosi ngagharị nke ngwa ọrụ na akụrụngwa. Enwere ike iji usoro a chịkwaa usoro igwe dị mgbagwoju anya, site na igwe na lahes ruo igwe igwe na ndị na-agagharị agagharị. Site na ịkpụzi NC, arụ ọrụ akụkụ akụkụ atọ nwere ike mezue na nhazi oge.
Ọtụtụ mgbe, a na-eji CAM (Kọmputa Nmepụta Nrụpụta) sọftụwia na ụlọ ahịa igwe iji gụọ faịlụ CAD na-akpaghị aka (Computer Aided Design) ma mepụta mmemme G koodu iji chịkwaa igwe igwe CNC.
Gịnị bụ CNC machining igwe Ngwá Ọrụ?
CNC igwe ngwá ọrụ bụ a igwe ngwá ọrụ nke integrates general igwe ngwá ọrụ na kọmputa usoro.
Akụrụngwa igwe a na-achịkwa gụnyere igwe, igwe igwe, lathes, drills na planer.
N'ime usoro nhazi CNC lathe, mkpebi nke usoro nhazi CNC n'ozuzu na-agbaso ụkpụrụ ndị a:
(1) Izi ezi na oke ike nke workpiece na-esichara ga-ekwe nkwa.
(2) Mee ka usoro nhazi ahụ dị mkpụmkpụ, belata oge njem efu ma melite arụmọrụ nhazi.
(3) Mee ka dọkụmentị na-eme ka ọrụ gbakọọ ọtụtụ ka o kwere mee ma mee ka usoro nhazi ahụ dị mfe.
(4) Maka ụfọdụ mmemme a ga - eweghachi, a ga - eji subroutines mee ihe.
The ụdị nke CNC igwe ngwaọrụ:
1.CNC igwe igwe
2.CNC machining center.
4.Electrical Ihapu CNC Machines.
5.CNC Waya Machinecha Machine
6.CNC nkenke egweri igwe
Ọdụdọ orùrù CNC igwe
CNC Waya Machinecha Machine
The akụkụ nke CNC machining
Igwe CNC meriri nkwụsị nke ọrụ aka nke ngwa ọrụ ọdịnala ọdịnala. Ọ nwere arụmọrụ dị elu, àgwà kwụsiri ike, nha kpọmkwem na akpaaka. Ọ dị nnọọ mma maka nkenke dị elu na imepụta ihe dị elu. CNC machining bụ ụzọ dị mkpa iji chọpụta nkenke akụkụ n'ichepụta.
Ngwa nke CNC machining
1. Belata ọnụọgụ akụrụngwa na ngwaọrụ, yana ịchọghị ihe nrụnye mgbagwoju anya iji hazie akụkụ nwere ụdị dị mgbagwoju anya. Ọ bụrụ na ịchọrọ ịgbanwe ọdịdị na oke nke akụkụ ahụ, naanị ịkwesịrị ịgbanwe usoro nhazi akụkụ, nke kwesịrị ekwesị maka mmepe na ngbanwe nke ngwaahịa ọhụrụ.
2. Igwe ọrụ CNC dị mma, nhazi nhazi dị elu, ikwugharị ugboro ugboro dị elu, ọ nwere ike izute nhazi ihe nhazi nke ụgbọ elu.
3. Mmepụta arụmọrụ dị elu n'ihe gbasara ọtụtụ iche iche na obere ogbe mmepụta, nke nwere ike belata oge nkwadebe mmepụta, nhazi ngwaọrụ na nyocha usoro, ma belata oge igbutu n'ihi iji nke kachasị mma. .
4. Machinable mgbagwoju profaịlụ nke siri ike na-machined site ot ụzọ, na pụrụ ọbụna hazie ụfọdụ akụkụ nke ike-hụrụ. Na nchịkọta, ọ bụ ụdị nke akụkụ ahụ doro anya nke nwere usoro dị mgbagwoju anya na obere ogbe ngwaahịa, dị ka nkenke axles, eriri anya ọdụ shanks, pin na ihe ndị ọzọ, ndị dabara adaba.
Companylọ ọrụ Mestech na-enye ndị ahịa ọrụ nghazi ziri ezi nke ọtụtụ ọla, akụkụ plastik. Ọ bụrụ na ịchọrọ ịmatakwu ozi, biko kpọtụrụ anyị.
Nke gara aga: Die mgbatị akụkụ
Osote: Machined akụkụ
Nlọ Ọrụ CNC machining
Vlọ ọrụ na-arụ ọrụ nke CNC
Ebu ebu ígwè